Faahfaahin: Qaraxyo ka dhacay Deegaanka Af-urur oo sababay dhimasho iyo dhaawac[Dhageyso] | SAHAN ONLINE
Faahfaahin: Qaraxyo ka dhacay Deegaanka Af-urur oo sababay dhimasho iyo dhaawac[Dhageyso]
Ciidamada PSF oo howlgal ku jira
AF-URUR – Waxaa duhurnimadii maanta laba qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan Puntland iyo dad shacab ah oo ku sugnaa tuullada Af-urur ee gobolka Sanaag.Qaraxyada oo laba ahaa ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac.
Qaraxa 1aad ayaa ka dhacay goob lagu iibiyo Qaadka oo ku taalla tuuladda Af-urur xilli ay goobta isugu soo xoomeen ciidamo iyo dad shacab ah oo doonayey iney Qaad iibsadaan,halka Qaraxii 2aad uu isla goobta ka dhacay markii askar iyo dad gurmad ah ay soo gaareen goobta si ay u caawiyaan dadka dhaawacmay.
Cabdiqaadir Cabdullaahi Bilcil oo ah Agaasimaha Isbitaalka Bilicil ee magaalada Carmo ayaa VOA u sheegay in 35 qof oo dad dhaawac ah la keenay Isbitaalka,waxa uu sheegay in qaarkood ay halis yihiin dhaawacyadoodu.
Wuxuu kaloo sheegay in uu arkay afar qof oo meyd ah oo saaran baabuur.
35 Qof oo dhaawac culus ah gacantayda ayaan ku dejiyay, qaarkood dhaawacyo halis ah ayay ka qabaan caloolsha, gacmaha iyo lugaha ayaa qaarkood dhaawacyo ka soo gaareen., 4 qof ayaa ugu daran oo aanan waxba ka qaban karin” ayuu yiri Agaasimaha Cusbitaalka Carmo
Wuxuu sheegay in dhaawacyada la keenay ay dhamaantood yihiin rag ka tirsan ciidamada iyo dadka rayid ah, waxaa kaloo uu xusay in dhaawacyada qaarkood looga soo tegay degaanka af-urur. Waxaana uu ka codsaday Dowladda Puntland, gaar ahaan Wasaaradda caafimaadka Puntland inay gargaar deg deg ah la soo gaaraan dadka dhaawac ah.
Dhanka kale wararka qaar ayaa sheegaya in tirada dadka ku dhintay qaraxyadaasi ay kor u dhaafayaan 10 qof, halka dadka ku dhaawacmayna ay gaarayaan ilaa 50 qof oo isugu jira askar iyo dadka shacab ah.
Ururka Al-Shabaab illaa hadda ma aysan sheegan mas’uuliyada weerarkan walow lagu yaqaano weerarada noocaan oo kale ah.
Al-Shabaab ayaa 8deedii bishii Jun, weerar abaabulan oo gaadmo ah oo ay ku qaadeen Saldhiga ciidamadda Puntland ee af-urur waxay ku dileen in ka badan 60 Askari, tiro kalena waa ku dhaawaceen.